နွေနေပူပူမှာ ရင်ကိုအေးစေပြီး ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုတဲ့ အစားအသောက်များ
13 Mar 2018 . 6:00 PM
ဆောင်းအကုန် နွေအကူး ရာသီဥတုကူးပြောင်းချိန်မှာ အပူချိန်တွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ ပင်ပန်းနွယ်ကာ ချွေးထွက်လွန်ပြီး ရေဓာတ်တွေ အများအပြားကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ ဒီနွေရာသီမှာ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေစေဖို့ ရေအပြင် အခြားသော ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ Healthy Drink တွေ၊ ရေဓာတ်ပေါပေါများများပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပင်ပန်းလေးလံနှေးကွေးခြင်းမဖြစ်ဘဲ သာသာယာယာလေး နွေရာသီကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။ သုတေသနပြုချက်တွေအရလည်း ရေဓာတ်အပြည့်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေစားပေးခြင်းက ကယ်လိုရီနည်းနည်းနဲ့ ဗိုက်ပြည့်နေစေတဲ့အတွက် ဝမှာကိုလည်း စိတ်မပူရပါဘူး။ ရေဓာတ်များများပါတဲ့ အစားအသောက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
သခွားသီးမှာ ရေဓာတ် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လို့ ရေဓာတ်ကြွယ်ဝမှုများတဲ့ အစားအသောက်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သူမှာပေါများစွာပါဝင်တဲ့ ရေဓာတ်ကြောင့် ရေဆာနေတဲ့အခါမှာ စားသုံးပေးလိုက်ရင် ရေဆာပြေစေပါတယ်။ ဒါအပြင် အမျှင်ဓာတ်အချို့နဲ့ Vitamin C ပါဝင်လို့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးလို့ ချွေးထွက်လွန်ပြီး ဖျားနာမှာလည်း မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ Diet လုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ သခွားသီးကိုရောပြီး Salad အနေနဲ့လည်း ပြုလုပ်ပြီး စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။
အစိမ်းရောင်အရွက်သုပ်က ကယ်လိုရီနည်းပါးတဲ့အပြင် ရေဓာတ်ကလည်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းတောင် ပါတယ်နော်။ Vitamin C ၊ Fiber နဲ့ Antioxidant Beta Carotene တွေ များစွာပါဝင်လို့ မျက်လုံးကျန်းမာရေးနဲ့ အသားအရေအတွက်ပါ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ နေ့လယ်စာ ဒါမှမဟုတ် ညစာကို အစိမ်းရောင်အရွက်များများပါတဲ့ Salad တစ်ပွဲစားပေးခြင်းက အဆီလောင်ကျွမ်းစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးစားသောက်ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေဓာတ် ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့အပြင် Vitamin C လည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အသီးအနှံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Berry နဲ့တွဲဖက်ပြီးစားပေးရင် ဆဲလ်အသစ်တွေကြီးထွားစေဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ရေဆာတဲ့အခါ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ဘယ်ရီသီးကို ရောစပ်ပြီး သရေစာအနေနဲ့ စားပေးလို့ရပါတယ်။
ရေဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အသီးအနှံကို ပြောတဲ့အခါမှာ ဖရဲသီးကိုလည်း ချန်ထားလို့မရပါဘူး။ နေပူပူကနေပြန်လာရင် ဖရဲသီးချိုချိုအေးအေးလေးကို စားလိုက်ရတဲ့အရသာက ရေခဲရေသောက်ရတာထက်တောင် ရင်ကိုပိုပြီး အေးမြစေပါတယ်။ ထိုအပြင် Vitamin C အရင်းအမြစ်ကို ဖရဲသီးကနေရတယ်လို့ပြောလို့ရအောင် Vitamin C လည်း အလွန်ကြွယ်ဝပါတယ်။ Lycopene နဲ့ Antioxidant ဓာတ်တွေပါလို့ အသည်းရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ခုခံကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Yogurt ချစ်သူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပါပဲ။ အသီးအနှံတွေမပါတဲ့ ရိုးရိုး Yogurt မှာဆို ရေဓာတ် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ Yogurt စားခြင်းက ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေစေသလို အပူပုပ်တွေကင်းစင်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ Calcium နဲ့ Vitamin B12 တွေလည်းပါဝင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
ရွှေဖရုံသီးက ချိုတဲ့အရသာရှိပြီး ရေဓာတ်လည်း ၈၈ ရာခိုိင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ Vitamin A ပါဝင်လို့ မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေသလို Vitamin C ၊ Potassium နဲ့ ဇီဝကမ္မဗေဒကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ Manganese လည်းပါဝင်လို့ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်အနေနဲ့ ချက်စားဖို့လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြထားတဲ့ အစားအသောက်တွေက ကယ်လိုရီလည်း အများကြီးမတက်စေသလို ရေဆာနေတဲ့အခါမှာ ရေငတ်ပြေစေဖို့ ရေဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အတွက် စားပေးနိုင်ကာ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း တကယ်ကို အကျိုးများတဲ့ အစားအသောက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှနေပေူပူမှာ ရငျကိုအေးစပွေီး ကနျြးမာရေးကို အကြိုးပွုတဲ့ အစားအသောကျမြား
ဆောငျးအကုနျ နှအေကူး ရာသီဥတုကူးပွောငျးခြိနျမှာ အပူခြိနျတှမွေငျ့တကျလာတာနဲ့အမြှ ပငျပနျးနှယျကာ ခြှေးထှကျလှနျပွီး ရဓောတျတှေ အမြားအပွားကုနျဆုံးတတျပါတယျ။ ဒီနှရောသီမှာ ရဓောတျပွညျ့ဝနစေဖေို့ ရအေပွငျ အခွားသော ကနျြးမာရေးကိုကောငျးမှနျစတေဲ့ Healthy Drink တှေ၊ ရဓောတျပေါပေါမြားမြားပါဝငျတဲ့ အစားအသောကျတှကေို စားသောကျပေးခွငျးအားဖွငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးနဲ့ ရဓောတျဆုံးရှုံးခွငျးကွောငျ့ ပငျပနျးလေးလံနှေးကှေးခွငျးမဖွဈဘဲ သာသာယာယာလေး နှရောသီကိုကြျောဖွတျနိုငျမှာ အသအေခြာပါပဲ။ သုတသေနပွုခကျြတှအေရလညျး ရဓောတျအပွညျ့ပါတဲ့ အစားအသောကျတှစေားပေးခွငျးက ကယျလိုရီနညျးနညျးနဲ့ ဗိုကျပွညျ့နစေတေဲ့အတှကျ ဝမှာကိုလညျး စိတျမပူရပါဘူး။ ရဓောတျမြားမြားပါတဲ့ အစားအသောကျတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
သခှားသီးမှာ ရဓောတျ ၉၅ ရာခိုငျနှုနျးပါဝငျလို့ ရဓောတျကွှယျဝမှုမြားတဲ့ အစားအသောကျတဈခုလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ သူမှာပေါမြားစှာပါဝငျတဲ့ ရဓောတျကွောငျ့ ရဆောနတေဲ့အခါမှာ စားသုံးပေးလိုကျရငျ ရဆောပွစေပေါတယျ။ ဒါအပွငျ အမြှငျဓာတျအခြို့နဲ့ Vitamin C ပါဝငျလို့ ကိုယျခံစှမျးအားကို မွှငျ့တငျပေးလို့ ခြှေးထှကျလှနျပွီး ဖြားနာမှာလညျး မစိုးရိမျရပါဘူး။ Diet လုပျသူတှအေနနေဲ့လညျး ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှနေဲ့ သခှားသီးကိုရောပွီး Salad အနနေဲ့လညျး ပွုလုပျပွီး စားသုံးပေးလို့ရပါတယျ။
အစိမျးရောငျအရှကျသုပျက ကယျလိုရီနညျးပါးတဲ့အပွငျ ရဓောတျကလညျး ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးတောငျ ပါတယျနျော။ Vitamin C ၊ Fiber နဲ့ Antioxidant Beta Carotene တှေ မြားစှာပါဝငျလို့ မကျြလုံးကနျြးမာရေးနဲ့ အသားအရအေတှကျပါ ကောငျးမှနျစပေါတယျ။ နလေ့ယျစာ ဒါမှမဟုတျ ညစာကို အစိမျးရောငျအရှကျမြားမြားပါတဲ့ Salad တဈပှဲစားပေးခွငျးက အဆီလောငျကြှမျးစဖေို့အတှကျ အကောငျးဆုံးစားသောကျပုံပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရဓောတျ ၉၁ ရာခိုငျနှုနျးပါဝငျတဲ့အပွငျ Vitamin C လညျးကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အသီးအနှံတဈခုဖွဈပါတယျ။ Berry နဲ့တှဲဖကျပွီးစားပေးရငျ ဆဲလျအသဈတှကွေီးထှားစဖေို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ရဆောတဲ့အခါ စတျောဘယျရီနဲ့ ဘယျရီသီးကို ရောစပျပွီး သရစောအနနေဲ့ စားပေးလို့ရပါတယျ။
ရဓောတျကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အသီးအနှံကို ပွောတဲ့အခါမှာ ဖရဲသီးကိုလညျး ခနျြထားလို့မရပါဘူး။ နပေူပူကနပွေနျလာရငျ ဖရဲသီးခြိုခြိုအေးအေးလေးကို စားလိုကျရတဲ့အရသာက ရခေဲရသေောကျရတာထကျတောငျ ရငျကိုပိုပွီး အေးမွစပေါတယျ။ ထိုအပွငျ Vitamin C အရငျးအမွဈကို ဖရဲသီးကနရေတယျလို့ပွောလို့ရအောငျ Vitamin C လညျး အလှနျကွှယျဝပါတယျ။ Lycopene နဲ့ Antioxidant ဓာတျတှပေါလို့ အသညျးရောဂါနဲ့ ကငျဆာရောဂါကိုလညျး ခုခံကာကှယျပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
Yogurt ခဈြသူတှအေတှကျတော့ သတငျးကောငျးပါပဲ။ အသီးအနှံတှမေပါတဲ့ ရိုးရိုး Yogurt မှာဆို ရဓောတျ ၈၅ ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၈၈ ရာခိုငျနှုနျးအထိ ပါဝငျပါတယျ။ Yogurt စားခွငျးက ဝမျးခြုပျခွငျးမှ ကငျးဝစေသေလို အပူပုပျတှကေငျးစငျကာ ခန်ဓာကိုယျကို ပေါ့ပါးလနျးဆနျးစပေါတယျ။ Calcium နဲ့ Vitamin B12 တှလေညျးပါဝငျလို့ ခန်ဓာကိုယျကို အကြိုးမြားစှာဖွဈထှနျးစပေါတယျ။
ရှဖေရုံသီးက ခြိုတဲ့အရသာရှိပွီး ရဓောတျလညျး ၈၈ ရာခိုငျနှုနျးပါဝငျပါတယျ။ Vitamin A ပါဝငျလို့ မကျြလုံးကနျြးမာရေးကို ကောငျးစသေလို Vitamin C ၊ Potassium နဲ့ ဇီဝကမ်မဗဒေကို ကောငျးမှနျစတေဲ့ Manganese လညျးပါဝငျလို့ ဆေးဖကျဝငျတဲ့ ဟငျးတဈခှကျအနနေဲ့ ခကျြစားဖို့လညျး သငျ့တျောပါတယျ။
အခုဖျောပွထားတဲ့ အစားအသောကျတှကေ ကယျလိုရီလညျး အမြားကွီးမတကျစသေလို ရဆောနတေဲ့အခါမှာ ရငေတျပွစေဖေို့ ရဓောတျကိုပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးဖို့အတှကျ စားပေးနိုငျကာ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကကွညျ့ရငျလညျး တကယျကို အကြိုးမြားတဲ့ အစားအသောကျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆော်ဒီကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာ သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ Jamal Khashoggi ရဲ့ နောက်ဆုံးစကားသံများ
စကားပြောကောင်းသူလို့ သတ်မှတ်ခံရစေဖို့ ဖြည့်တင်းသင့်တဲ့ အရည်အချင်းများ
ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားရင် အရေးကြီးဆုံး ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
၂ဝ၁၈ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ဝင်ရောက်မှုအများဆုံး (၁ဝ) မြို့
by Kyaw Soe Aung . 10 hours ago
SHOP ရဲ့ 12.12 အထူးအွန်လိုင်းလျှော့ဈေးမှာပဲ ၀ယ်ယူနိုင်မယ့် Huawei Y Max
by Kyaw Soe Aung . 11 hours ago
ဒမ်ဘီလီ Dembele ကို အသင်းမှာပဲဆက်ရှိဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ မက်ဆီ Messi
ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် ရာသီအစ ရလဒ်အကောင်းဆုံး (၆)သင်းမြောက်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်
အလွန်အကျွံအောင်ပွဲခံမှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ ရေးဗားပလိတ်ပရိသတ်များ
ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုး(၁၀၀)ကို ပွဲအနည်းဆုံးနဲ့ သွင်းယူခဲ့သူများ (၂)
အိုဇေးလ် Ozil နေရာ အစားဝင်ဖို့ရှိနေတဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားများ